अाजको खेलमा कसले गर्ला विश्वकप फाइनल खेल्ने सपना साकार? | Suvadin !
अाजको खेलमा कसले गर्ला विश्वकप फाइनल खेल्ने सपना साकार?
विश्वकपमा दुवै टोली विजय लक्ष्यका साथ आज राति ११ः४५ बजे भिड्दैछन्। सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्दा क्रोएसिया अपराजित छ भने इङ्ग्ल्याण्ड समूह चरणमा बेल्जियमसँग पराजित भैसकेको छ।
काठमाडाैं, २७ असार – रुसमा जारी विश्वकप फुटबलमा अाज राति अन्तिम सेमिफाइनल खेलमा क्रोएसियाले इङ्ल्यान्डको सामना गर्दैछ। यो खेलले इङ्ल्यान्डलाई ५२ वर्षपछि फेरि विश्वकपको फाइनल खेल खेल्ने अवसर जुरेको छ।
यद्यपि, यसका लागि इङ्ल्यान्डले निकै सशक्त प्रतिद्वन्द्वी क्रोएसियालाई सेमिफाइनलबाटै घर फर्काउनु पर्ने हुन्छ। सन् १९६६ मा आफ्नै देशमा भएको विश्वकपको उपाधि जिते पश्चात इङ्ल्यान्डले विश्वकपको फाइनल चरणको यात्रा तय गर्न सकेको छैन।
क्वाटरफाइनलमा क्रोएसियाले आयोजक रूसलाई ट्राइब्रेकरमा ४–३ गोलअन्तरले पराजित गरिसकेको छ भने इङ्ग्ल्याण्डले स्विडेनलाई २–० ले पाखा लगाउँदै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको हो।
सन् १९९८ को विश्वकपमा प्रवेश गरेको क्रोएसिया त्यतिबेला नै सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो। त्यसयता क्रोएसिया सेमिफाइनलमा पुग्न सकेको छैन। विश्वकपमा क्रोएसियाले दोस्रो पटक सेमिफाइनल खेल्दैछ। सन् १९९० मा पछिल्लो पटक सेमिफाइनल खेलेको इङ्ग्ल्याण्ड सन् १९६६ को विश्वकप विजेता हो भने इङ्ग्ल्याण्डको यो तेस्रो सेमिफाइनल खेल हो।
अहिले विश्वकपमा क्रोएसिया र इङ्ग्याण्ड पहिलो पटक भिड्न लागेको हो। यसअघि सन् २००४ को भएको युरोकपमा इङ्ग्ल्याण्डले क्रोएसियालाई ४–२ गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो।
यी दुई टोलीले अहिलेसम्म सात खेल खेलेकामा इङ्ग्ल्याण्डले ४ खेल जितेको छ भने क्रोएसियाले दुई खेल जितेको छ। मंगलबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा फ्रान्सले बेल्जियमलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। यी दुई टोली क्रोएसिया र इङ्ग्लयाण्डका विजेताले फाइलनमा फ्रान्ससँग सामना गर्नेछन्।